Shirka Dib u heshiisiinta Galmudug oo lasoo afgarayo iyo Madaxwayne Farmaajo oo Dhuusamareeb tagaya
What’s new in Wargeyska Xaqiiqa Times
Qaylo dhaanta Kenya maxaa u sababa, baroortu orgiga ka weyn? February 25, 2019
Somali Officials Misrepresent IMF Statements and Reports January 2, 2019
Project Procurement Specialist December 9, 2018
What’s new in Local News
Germany increases its Somali support in its development cooperation by 73M October 7, 2019
SJS: Journalists Should remain professional and responsible ahead of the upcoming elections October 7, 2019
SJS supports medical fundraising for wounded Somali human rights September 21, 2019
What’s new in World News
Car bomb blast kills 5 in Mogadishu February 4, 2019
Dubai Port World official killed in Somalia’s Puntland February 4, 2019
What’s new in Siyaasada
Madaxweyne Farmaajo oo saxiixay Sharciga Doorashooyinka Qaran February 21, 2020
Xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta oo heerkii ugu xumaa gaaray May 7, 2018
Alshabaab oo Jamaame isaga baxay
Shirkadda diyaaradaha Jambjet oo joojisay duulimaadkii Soomaaliya
Xoghayaha arrimmaha dibadda Maraykanka oo Itoobiya gaaray
Odayaal iyo Siyaasiyiin maxkamad lagu soo taagay Boosaaso
By Xaqiiqa Times / in Wararka Maanta / on Sunday, 15 Sep 2019 05:39 AM / 0 Comment / 42 views
Waxaa lagu wadaa in la soo geba-gabeeyo Shirka dib u heshiisiinta Beelaha dega deegaannada Maamulka Galmudug,kaas oo 5-tii Bishaan uu Magalada Dhuusamareeb ka furay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Shirka ayaa waxaa loogu talo galay inay ka qeyb-galaan 356 Ergo,hayeeshee ay gaareen in ka badan 700 ergo oo laga soo kala xulay 11-ka Beelood ee dega deegaannada Maamulka Galmudug,waxaana 10 Maalood oo uu socday looga hadlay arrimo dhowr ah.
Shirka ayaa qodobada looga hadlay waxaa ka mid ah:-
1: Ergadii loogu talo galay Shirka oo aheyd 356 ergo ayaa kor u dhaaftay 700 ergo.
2: Waxaa si nabad ah loogu soo dhaweeyey Caasimadda Dhusamareeb mudo bil ah iyaga oo aan dareemin ciriiri iyo culeys.
3: Waxa ay si xor ah usoo bandhigeen tabashooyinkii ay qabeen iyo qaladaadkii horay usoo dhacay iyaga oo wada qaatay Casharo la xirrira Xallinta Khilaafaadka.
4: Waxa ay wada gar-waaqsadeen baahida loo qabo isa-saamax, is-cafin, is-aaminid iyo Xalay-dhalay.
5: Waxa ay wada bogaadiyeen kaalinta hagar la’aanta ah ee Dawladda Federaalku ka ciyaartay Galmudug gaar ahaan Madaxweyne Farmaajo iyo RW Khayre.
6: Waxa ay wada bogaadiyeen Heshiiskii Garabyada Siyaasadda ee Galmudug.
7: Waxa ay soo wada dhaweeyeen Musharaxiinta Xilka Madaxtinimada Galmudug.
8: Waxa ay wada qireen baahida loo qabo dhismaha maamul cusub oo leh Aragti iyo Tayo, loona wada dhanyahay.
9: Waxa ay wada bogaadiyeen Heshiiskii dhex-maray dadka degan deegaanada Xeraale iyo Huurshe ee soo af-jaray Colaadii loogu magac-daray (Colaada Qarniga) ee Galmudug.
10: Waxa ay wada qireen baahida deg-dega ah ee loo qabo Xoreynta deegaanada Galmudug ee weli ku jira Gacanta Ururka Al-Shabaab.
Saacadaha soo socda ayaa la filayaa in Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo xiro wajiga 1aad ee Shirweynaah dib u heshiisiinta beelaha dega deegaannada Dowlad goboleedka Galmudug,waxaana Magalada Dhuusamareeb laga dareemayaa qaban qaabada soo dhaweynta wafdiga Madaxweynaha.
Muqdisho (XT) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo xalay ka qeybgalay munaasabadda...
Wararka ka imaanaya degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in ay halkaasi isaga baxeen...
Shirkadda diyaaradaha Jambjet ee dalka Kenya ayaa joonisay duulimaadkii ay ku imaan jrtay garoonka Aadan...
Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka, Mike Pompeo ayaa gaaray dalka Itoobiya halkaas oo uu kulan kula...
XAQIIQA TIMES NEWSPAPER
Muqdisho (XT) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo xalay... Read more →
February 20, 2020 7:40 am
Wararka ka imaanaya degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ayaa... Read more →
Shirkadda diyaaradaha Jambjet ee dalka Kenya ayaa joonisay duulimaadkii ay... Read more →
February 18, 2020 5:39 pm
Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka, Mike Pompeo ayaa gaaray dalka Itoobiya... Read more →
January 1, 2020 1:51 pm
Maxkamada Darajada 1aad ee Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari... Read more →
Dowladda iyo ASWJ oo qodobo ku heshiiyay
January 1, 2020 1:49 pm
Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug waxaa kulan saacado badan qaatay... Read more →
Dowladda Soomaaliya oo wax laga xumaado ku tilmaantay war kasoo baxay Hay’adda ICRC
January 1, 2020 1:46 pm
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya war laga xumaado ku tilmaamtay... Read more →
Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya oo Muqdisho ku qabatay kulan ku saabsan arrimaha canshuur bixinta
December 30, 2019 3:56 pm
Muqdisho, Diseembar 30, 2019 – Munaasabad lagu shaacinayey ahmiyada sharciga... Read more →
16 qof oo dhaawac culus kasoo gaaray Weerarkii shalay oo Turkiga loo qaaday
December 29, 2019 11:46 am
Waxaa goordhaw Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ka... Read more →
Madaxwayne Farmaajo oo saxiixay sharciga Maareynta Maaliyadda Guud iyo sharciga Shirkadaha Ganacsiga
December 26, 2019 3:35 pm
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay sharciga... Read more →
Tweets by @Xaqiiqa_Times
© Copyright Xaqiiqa Times - Magazine